I-Xbox elandelayo izogxila kumanani wohlaka nezikhathi zomthwalo - I-TANET RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM I-Xbox elandelayo izogxila kumanani wohlaka nezikhathi zokulayisha
I-Xbox elandelayo izogxila kuzinga lohlaka nezikhathi zokulayisha
Yini lesizukulwane lesilandzelako semakhaya lesingasibekela yona ngaphandle kwekukhuphuka kwesicondvo? I-Xbox elandelayo kufanele kunoma yikuphi ukugxila, ikakhulukazi, kusilinganiso sohlaka nezikhathi zokulayisha.
E-E3 2019 emasontweni ambalwa edlule, iMicrosoft iqinisekise ukusebenza esizukulwaneni esilandelayo se-console Xbox. Okwamanje, kuncane kakhulu esikwaziyo ngalokhu kuhlanganiswa okusha ngaphandle kokuthi inkampani yaseRedmond isebenza ekwakhiweni kwayo. Kepha kubukeka sengathi lo mshini uneprosesa efanelekayo ye-AMD, i-RAM GDDR6 ne-SSD entsha yesizukulwane. Yini okufanele ucabangele ukusebenza kakhulu, ephezulu kakhulu ngokuqhathaniswa namamodeli wamanje. Abadlali bebelindele okungaphansi. Kepha iMicrosoft ibukeka funa ukugxila ezicini ezithile ezithile.
I-Xbox elandelayo ifuna ukugxila kuzinga lohlaka nezikhathi zomthwalo
Ngalezo zingxenye, isizukulwane esilandelayo seXbox singaba ngcono amahlandla amane kuneXbox One X. Ebuzwa yi-GameSpot, uPhilip Spencer, umqondisi wegatsha le-Xbox eMicrosoft, muva nje uveze eminye imininingwane emisha nge-console. Ikakhulu ezinye izici umdondoshiya waseMelika anqume ukugxila kuzo. Lezi yizilinganiso zokuqabuleka nezikhathi zokulayisha emidlalweni. Okunikeza abadlali okuhlangenwe nakho kokugembula okubushelelezi nokucwiliswa okunomthelela ngokwengeziwe. "Ngicabanga ukuthi sifuna ngempela lesi sizukulwane esilandelayo ukuthi sigxile kuzinga lohlaka nokudlala kwemidlalo. Qiniseka ukuthi imidlalo ilayisha ngokushesha okukhulu, qiniseka ukuthi bayadubula ngezinga lohlaka oluphezulu kakhulu. Futhi yithina esakha iWindows ukuze sikwazi ukubona wonke umsebenzi owenziwayo kwi-PC nokuthi abakhiqizi abakhiqizayo. Abantu bathanda imidlalo ku-60 fps, ukusebenzisa izihloko ku-4K ku-60 fps kuzoba umgomo obaluleke kakhulu kithina."
Lokhu ukunikela ngesipiliyoni sokudlala esijabulisayo nesingene kakhulu kubadlali
Izinga lohlaka nokulungiswa kwemidlalo empeleni kube ngamaphuzu aphikisanayo lapho i-Xbox One ifika emakethe. Abadlali abaningi bayiqhathanisa nePS4 futhi kuleli phuzu, ikhonsoli yakwaSony yaba ngcono kakhulu. Okwamanje, akekho owaziyo ukuthi lesi sizukulwane esilandelayo seXbox sizothengiswa nini kodwa akunakungatshazwa ukuthi isivele ilindelwe ngabadlali ngabomvu. Njengazo zonke izixhaxu, inkampani yeRedmond idlala enkulu futhi izokwenza okuningi ukushaya induna kuyimbangi yayo yezikhathi zonke.
Izinganekwane ze-Apex: Iron Crown, imodi yesidlali esisodwa iyadlalwa amasonto amabili
ISplinter Cell: Ubisoft ulungiselela ukubuya kwelayisense
I-Shenmue 3: I-Trial Version imenyezelwe ngoSepthemba kwi-PC
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.begeek.fr/la-prochaine-xbox-se-concentrera-sur-le-frame-rate-et-les-temps-de-chargement-325220
Lapho iNorth Korea ixhasa uhlelo lwayo lwenuzi ngokusebenzisa i-cyberattacks enenzuzo - iCyberguerre